आदिवासी जनजाति रेडियो र रेडियो लिखुको अनुभव – Sunuwar.org
रेडियो स्थापना गर्न जति सजिलो छ त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न बढो चुनौतिपूर्ण छ । आदिवासी जनजाति रेडियो भन्ने वित्तिक्कै यसको चिनारी धुन कस्तो हुने ? यस्को स्टेशन परिचय धुन कस्तो हुने ? यी धुन निर्माण गर्दा प्रयोग गर्ने बाजा कस्ता हुने ? विहानको धुन कस्तो रहने र बेलुकी कस्तो धुनको प्रयोग गर्ने, आदिवासी जनजाति गीत संगीत, श्रृङ्गार, रस कस्तो हुने भन्ने अनेक तर्क वितर्क, प्रश्नहरुले निरन्तर ठुङ्नु कुनै अनौठो कुरा त होइन । सँग सँगै आदिवासी जनजातीयपन छाडेर दक्षिण भारतीय मुलुकको संगीतबाट प्रेरित संगीतकार, संगीत संयोजक, वाद्यवादकले आदिवासी जनजाति बाजा बजाउन नजान्नु नसक्नु र जो बजाउन जान्ने आदिवासी जनजाति जन्मजात कलाकार छन् उनीहरुमा आधुनिक प्रविधि र स्टुडियो ज्ञान नहुँदा रेडियोलाई चाहिने ठेट नेपालका आदिवासी जनजाति धुन नपाउनु बढो पिरलोको विषय भएको छ । हुन त यी सबै कुरा बन्न सक्ला तर त्यस्तो गीत संगीत उत्पादन गर्ने प्रयाप्त समय र पैसा नहुनु अर्को समस्या रहेको हामी जोसुकै आदिवासी जनजातिले महसुश भइरहेको छ । विहान बजाउने आदिवासी जनजाति संगीत, भजन, प्रवचनहरु अहिलेसम्म उपलब्ध छैनन् । सम्भवतः आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृतिमा दिउँसो र बेलुकी पूजा आराधना गरिने भएकोले पनि हुन सक्छ । अहिलेसम्म मुक्दुम सम्बन्धि प्रवचन गर्ने चलन नभएको हुँदा मुक्दुम प्रवचन दिने र प्रवचनको रेकर्डहरु साथै मुक्दुम वाचनका रेकर्ड अभाव रहे । साथ साथै आदिवासी जनजाति सोँच र दृष्टिकोणका मानव संसाधनको खाँचो रह्यो । निस्चय पनि साधारण वा अहिले वजारमा चलेको रेडियोको शैलीमा कार्यक्रम चलाउनको लागि समाचार संकलनको लागि मानिस पाइएला तर आदिवासी जनजाति दृष्टिकोणलाई आत्मसत गर्ने जनशक्तिको अभाव रेडियो लिखुले महशूस गर्यो । अल्पसंख्याक आदिवासी जनजाति भएको र कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नभएकोले पनि आर्थिक स्रोतको अभाव रह्यो ।
« कतारबाट जयकृष्ण सुनुवारलाई आपतकालीन सहयोग : साउदीबाट पनि सहयोग घोषणा
कुबेतबाट पनि सहयोग प्राप्त »